ဘယ် Day Party နဲ့ မှ မတူတဲ့ Party ကို FREE တက် ၊ FREE စားသောက်ပြီး FREE ကရမဲ့ အပြင် Model Girl, Model Boy
ချောချောလေးတွေနဲ့တွဲကလို့ရနိုင်တယ် ၊ Game အထူးအဆန်းလေးတွေကို ၀င်ကစားရင်း လက်ဆောင်ပစ္စည်းလေးတွေပါ ရနိုင်တယ် ဆိုရင် သင် အံ့သြ သွားမလား ?
မအံ့သြပါနဲ့ ! သင့် ဘ၀မှာ တခါမှ မကြုံဘူးသေးတဲ့ ဘယ် Day Party နဲ့ မှမတူတဲ့ Special Day Party ကို တက်ပြီး အတွေ့ အကြုံ အသစ်အဆန်းလေးတွေ ရယူဖို့ဒီဟာ လေးတွေကိုသာ လုပ်လိုက်ပါ ။
(၁) 09 - 73206348 ( သို့ ) 09 - 73041997 သို့ ဖုန်းဆက်ပြီး SKY LARK လက်တွေ့ ကျကျ အသားဖြူ ခရင်(မ်) ၃၀၀၀ ကျပ်တန် ( ၄ ) ဘူး မှာလိုက်ပါ ။ ရန်ကုန်မြို့မည်သည့် နေရာသို့ မဆို အိမ် အရောက် ပို့ ပေးမည် ဖြစ်ပါသည် ။
ဆိုင်သို့ ကိုယ်တိုင်သွားရောက် ၀ယ်ယူလိုပါက စိန်ဂေပာာ (လှည်းတန်း) နှင့် RUBY Mart ( မြို့ ထဲ ) တို့ ရှိ အလှကုန်ကောင်တာများတွင် ရရှိနိုင်ပါသည် ။
သတိ - Code ရိုက်ထည့်ပြီးပါက ဤ cardကိုမပစ်လိုက်ပါနှင့်။ Party ပွဲ လာသည့် အခါ ဤ card ကို မိမိနှင့် တပါးတည်း ယူ လာရမည် ။
(၂) SKY LARK လက်တွေ့ ကျကျ အသားဖြူ ခရင်(မ်) ၄ဘူးတွဲ ပါကင် ကို ဖေါက်လိုက်သောအခါ အထက်တွင် ဖေါ်ပြထားသော ကဒ်ကို တွေ့ ရမည် ဖြစ်ပါသည် ။ ခဲခြစ်လိုက်လျှင် ပေါ်လာမည့်Code နံပါတ်ကို အောက်ရှိ Code Box တွင် ရိုက်ထည့် ရပါမည် ။
Code No မရိုက်ခင် ဤ Website တွင် Register မလုပ်ရသေးပါက Register အရင်လုပ်ပါ ။ ပြီးလျှင် Login ၀င်ပါ ။ ပြီးမှ အမည် ၊ အသက် မှတ်ပုံတင်အမှတ် ၊ နေရပ်လိပ်စာ နှင့် Code No တို့ ကို ဖြည့်ပါ ။
အပေါင်းအသင်းများပြီး သူငယ်ချင်းများကို ပြန်လည် ရောင်းချလိုသူများ၎ဘူးတွဲပါ (၁၂) ပါကင် ယူပါက (၁) ပါကင် Free အဖြစ် (၁၃) ပါကင်ရရှိမည် ဖြစ် ပါသည် ။ မှာသည့် အချိန်တွင် ငွေအပြည့် မချေပေးနိုင်ပါက ( ၁၂ ) ပါကင်အတွက် 44,000 ကျပ်ကို ပေးချေထားပြီးကျန်ငွေ100,000 ကျပ်ကို (၅) ရက်အတွင်း ပေးချေရပါမည် ။ ကျန်ငွေ ပေးချေသည့် အခါ Free တပါကင်ကိုပါ တပါးတည်း ရရှိမည်ဖြစ်ပါသည် ။
ဤ Day Party သည် အခြားမည်သည့် ပါတီနှင့်မှ မတူပါ ။ လက်မှတ်တစ်စောင်ကို 8000 - 10000 ကျပ် ပေးဝယ် တက်ရပြီး အထဲရောက် လျှင်လည်း ဘာစားစရာ သောက်စရာမှ မရ ။ ပွဲမှာလည်း အဖြစ်သာစီစဉ်ထားကြသည့် ပါတီပွဲများ နှင့် မိုး နှင့် မြေ ၊ ဆီ နှင့် ရေ ပမာ ကွာ ပါသည် ။
အခြား Day Party နှင့် မိုးနှင့်မြေ ၊ ဆီ နှင့် ရေ ကွာခြားပုံများ
SKY LARK လက်တွေ့ ကျကျ အသားဖြူ ခရင်(မ်) လေးဘူးကို သာဝယ်ရပြီး ထို အသားဖြူ ခရင်(မ်) ကို လိမ်းကာ လူတကာ ငေးကြည့်
ရလောက်အောင် ဖြူဝင်း တောက်ပ နူးညံ့သော အသားအရေ ပိုင်ရှင်အဖြစ် မိမိကိုယ်ကိုယ် ယုံကြည်မှုအပြည့် ရရှိကာ လန်းဆန်းတက်ကြွ
သောစိတ်ဖြင့် ပါတီပွဲကို Free တက်ရမည် ။
ပါတီပွဲတွင်လည်း ထမင်းနှင့် ကြက်သားပာင်း တပွဲ + ဘီယာခွက်နှင့်အပြည့် " RED WINE " ( နှလုံးနှင့် ကျန်းမာရေးအတွက် အထူးကောင်း
မွန်သော အကောင်းစား ပြင်သစ် ၀ိုင် ) တစ်ခွက်စီ FREE ရအုံးမည် ။ အခြား ပါတီပွဲများကဲ့ သို့ ရိုင်းဆိုင်းခြင်း မရှိဘဲ ယဉ်ယဉ်လေးနဲ့ရင်ခုန်
ဖွယ်ကောင်းသောGAME အသစ်အဆန်းများကိုလည်း ကစားရအုံးမည် ။
ဒါတင် မကသေးပါ ။ ကံစမ်းမဲ နှိုက်ပြီး 60,000 ကျပ်တန် လက်ဆာင်ပစ္စည်း တွေလည်း ရနိုင်ပါသေးသည် ။
ကဲ ! ဒီလောက်တောင် အစစ အရာရာ အဆင့်မြင့် ပြည့်စုံပြီး အလွန့် အလွန်ကို တန်လွန်းအားကြီးတဲ့ ပါတီပွဲ ကို မတက်ချင်ကြဘူးလား ?
တက်ချင်ပါတယ် ၊ ဒါပေမဲ့ငွေ မရှိဘူး!